UMAMA WE-ETIQUETTE YOKUNXIBA UMYENI: NGUWUPHI UMBALA OYA KUNXIBA, NGUBANI OWUKHETHAYO - IFASHONI
Eyona Ifashoni Umama woMyeni onxibe iEtiquette oomama bafuna ukuFunda
Umama woMyeni onxibe iEtiquette oomama bafuna ukuFunda
Ukusuka kubani okhetha isinxibo kwimibala efanelekileyo. Iifoto zeHirlirlume
Ukuhlaziywa kwe-Sep 01, 2020
Njenge Umama womyeni , Ayinakuphika into yokuba umtshato wonyana wakho ubalulekile kuwe. Ukongeza ekuncedeni isibini ekukhetheni imisebenzi yokucwangcisa, uya kuba nayo indima ebalulekileyo kwitheko lomtshato ngosuku olukhulu. Ngenxa yoku, uyakufuna impahla ekhethekileyo yomtshato. Nazi iindaba ezimnandi: Umama womkhwenyana wokunxiba uguquke kule minyaka idlulileyo. Kwixesha elidlulileyo, oomama bobabini umtshakazi kwaye umyeni ngokwesiko wayenxiba iilokhwe zematriki — kodwa akusenjalo. Ngoku, oomama bayakhuthazwa ukuba banxibe imbonakalo ebenza bazive benemfashini kwaye bezithembile (ngemvume yomtshakazi, ewe).
Ngaphambi kokuba uqale uyokuthengela umama wengubo yomyeni, kukho izinto ezithile ekufuneka uzithathele ingqalelo kuqala. Apha, siza kuqhekeza umama womkhwenyana wokunxiba wonke umama afunde. Siphendula eyona mibuzo iqhelekileyo yesitayile, enjengokuba umama womyeni kufuneka enxibe ntoni kwaye yeyiphi imibala ekufuneka ibe yiyo. Nje ukuba uhlambe kumama womkhwenyana wokunxiba, uya kuba nakho ukufumana impahla emangazayo yosuku olukhulu.
Unxiba ntoni uMama woMyeni?
Umama womkhwenyana wokunxiba awunzima. Njengomama womtshakazi, umama womyeni kufuneka anxibe isinxibo esivumelana nesimbo somtshato. Ixesha lendawo kunye nendawo enokubakho inokunceda ekuboneni ukuba loluphi uhlobo lonxibe umama kamyeni. Izambatho ezintle zangokuhlwa, iilokhwe ze-lace midi kunye ne-chic jumpsuits zonke iindlela ezifanelekileyo zoomama. Umama wengubo yomyeni kufuneka naye alandele ikhowudi yokunxiba yomtshato . Imitshato emiselweyo iya kufuna isinxibo esiphakamileyo okanye iblukhwe, ngelixa isinxibo sinokukhululeka kumtshato oqhelekileyo. Ngokubanzi, umama womyeni kufuneka anxibe into entle kunye necengayo. Yiya kwinkangeleko ebonisa isitayile sakho-akukho sizathu sokuba unganxibi mkhwa we-mzuzu okanye ukuhamba kwakho.
Nguwuphi umbala omele unxitywe nguMama woMyeni?
Kuyakhuthazwa ukuba uyeke ukunxiba ii-hues ezimhlophe, ezi-blush okanye ezingathathi hlangothi ezinokubonakala zimhlophe kwikhamera ngaphandle kokuba zivunywe ngumtshakazi. Ezi shades zinokubonakala zifana nesinxibo somtshato somtshakazi, kwaye kusoloko kulunge ngakumbi ukunqanda nakuphi na ukungalunganga kombala. Nangona kunjalo, ezinye izibini zinokufuna i wonke umtshato omhlophe -Ukuba kunjalo, ukunxiba umbala onqabileyo kulungile.
Esi sibini sinokufuna ukuba amalungu osapho adibanise imibala kunye neempelesi kunye nabatshati. Sebenza kunye ne-to-be-weds ukumisela imibala embalwa eya kuthi incedise iphalethi yabo abayithandayo. Ukuba nale ncoko ngaphambi kokuthenga kuya kuyiphucula inkqubo kuye wonke umntu obandakanyekayo. (Kwaye, iya kunciphisa ukhetho lokunxiba nawe.)
Ngubani okhetha uMama woMyeni?
Unoxanduva lokukhetha iimpahla zomtshato wakho — uyakuba uyinxibe, ngapha koko. Ngaphandle koku, umama womyeni usakhuthazwa ukuba athethe malunga nokunxiba nonina womtshakazi kunye nesibini. Ukuba nencoko evulekileyo kwasekuqaleni kuya kuqinisekisa ukuba wonke umntu ukwiphepha elinye xa kuziwa kwifashoni yosuku lomtshato.
Ngaba uMama woMyeni kufuneka afane noMama woMtshakazi?
Hayi, i oomama bomtshakazi kwaye umyeni akufuneki afane ngosuku lomtshato. Bobabini bayakhuthazwa ukuba banxibe iimpahla ezimele isitayile sabo. Ukuba esi sibini sikhetha ukuba oomama banxibe iimpahla ezincedisayo, nangona kunjalo, sebenzani kunye ukufumana imibala okanye ii-silhouettes ezibonakala zihle kunye. (Umzekelo, iilokhwe ezimbini ezineepateni ezibhalwe ngqindilili okanye imibala eqaqambileyo zisenokungqubana kwiifoto.) Ngokulungelelanisa iilokhwe, oomama bomyeni nomyeni baya kuyiphepha imibala engafaniyo okanye enye inxibe ngokungaphezulu kakhulu kunenye. Ukuba oomama baphela benesinxibo esifanayo, banokwahlula inkangeleko yabo ngezixhobo ezinje ngezacholo okanye iziqwenga zeenwele.
Ngaba oomama kufuneka bazithenge nini iimpahla zabo?
Oomolokazana bafumana iilokhwe zabo kwangoko kwinkqubo yocwangciso (ngokuqinisekileyo unyaka ukuya kwiinyanga ezilithoba ngaphambi komhla womtshato), kwaye oomama kufuneka bacwangcise ukufumana imbonakalo yabo kungekudala. Oku kuqinisekisa ukuba wonke umntu unexesha elingenaxinzelelo lokufumana utshintsho olwenzekayo xa kukho imfuneko. Imikhwa yesiko ithi umama womtshakazi kufuneka afumane isinxibo sakhe kuqala, kodwa ayingomthetho oqinileyo. Ngonxibelelwano oluvulekileyo kuyo yonke inkqubo, iintsapho zinokusebenza kumda wexesha ohambelana ngokufanelekileyo neemfuno zabo.
isipho somtshato ukusuka kumama ukuya kwintombi
apho eBhayibhileni ithi
isitya sokuhlambela sokuhlambela
ezona ndawo zibalaseleyo zokutshata
ukubetha ngempama kwebrashi
uthini umfundisi emtshatweni